Sida Loola Soo Degsado Photomath-ka PC Bilaash (Noocii Ugu Dambeeyay) | War gadget
Sida loo Download Photomath ee PC Free (Nooca ugu dambeeya)
Paco L Gutierrez | | Android, General, Tababarada
PhotoMath wuxuu noqday mid caan ah qalab loogu talagalay taleefannada gacanta, iyada oo aan ku xallin karno wax kasta oo dhibaato xisaabeed ah iyada oo la adeegsanayo kaameradda kamaraddeenna. Soosaaruhu wuxuu ugu yeeray arjiga inuu yahay kalkuleytarkii ugu horreeyay ee ku saleysan kamarad, laakiin taa beddelkeed waa aalad aad u qiimo badan oo wax lagu baro guriga, maadaama ay wax badan ka caawin karto waalidiinta doonaya inay ka caawiyaan carruurtooda inay sameeyaan shaqadooda guriga. Codsigan waxaan si fudud u qaadaneynaa sawir isla'eg ah oo waxay na siineysaa natiijada, iyo sidoo kale tilmaamo lagu fulinayo talaabo talaabo ah.
Laakiin, Codsigan ma loo isticmaali karaa kombiyuutarkayaga? Haa, inkasta oo tan loo baahan yahay inaan u adeegsanno emulator Android ahDhibaato maahan laakiin waxay ku noqon kartaa wax aan raaxo ku lahayn qaar iyo xoogaa dhib badan. Waxay si gaar ah waxtar ugu leedahay kuwa aan dooneynin inuu moobiilkoodu ku dhowaado inta ay wax baranayaan ama shaqeynayaan. Shaki la'aan, arday kasta ama waalid kasta wuu ku qanacsanaanayaa in qalabkan loogu isticmaalo aalado badan intii suurtogal ah. Maqaalkan waxaan ku tusi doonnaa sida loogu soo dejisto PhotoMath kombuyutarkaaga bilaash ah qaabkiisii ​​ugu dambeeyay.
1 1. U soo dejiso emulator Android ah kombuyuutarka
2 2. Ku rakib emulator-ka Android kombiyuutarkayaga ama macOS.
3 3. Soodejiso Photomath
4 Barnaamijyada xiisaha leh ee Android si loogu daydo kombuyuutarka
1. U soo dejiso emulator Android ah kombuyuutarka
Codsigan waxaa loo heli karaa Android marka waa inaan ku dayanaa Android kombuyutarkayga, taasna waxaa ku jira barnaamijyo badan, laakiin waxaan kula talinaynaa mid gaar ah, waa Bluestacks. Waa shaki la'aan barnaamijka jilitaanka ugu caansan ee Android, laakiin sidoo kale kan ugu hufan uguna shaqeynaya. Marka lagu daro noqoshada shaqada ugu badan, rakibisteeda waxay leedahay faa iidada haddii aan dhibaato leenahay, waxaan heleynaa kumanaan xalal ah oo hal guji ah oo shabakadda ah.
Ku soo dejiso Bluestacks halkan xiriirkan PC ama MAC.
Waxaad eegi kartaa isku-ururinta emulators-ka Android ee aan horeyba ugu sameyn jirnay webka, xiriirkan haddii aad leedahay macOS, ama kan kale haddii ay dhacdo inaad haysato Windows PC.
2. Ku rakib emulator-ka Android kombiyuutarkayaga ama macOS.
Si loo rakibo emulator-ka 'Bluestacks' waa mid aad u fudud, waxaan kaliya u baahanahay inaan galno degelkeeda rasmiga ah oo aan bilowno soo dejintaWaxaan ka heli doonnaa galka soo dejinta ee kooxdeena. Mar alla markii soo dejintu dhammaato, waanu fulin doonnaa faylka rakibaadda oo waanu dhammayn doonnaa iyadoo la raacayo dhammaan tilmaamaha, ka taxaddar inaadan ku darin waxyaalo ku darsan biraawsarka ama aan aqbalin nooc kasta oo xayeysiin ah oo loogu talagalay boostadayada.
3. Soodejiso Photomath
Lahaanshaha emulator-ka oo si buuxda loogu rakibay kombuyuutarkayaga, waa inaanu socodsiinaa oo raadi barta baaritaanka, dhexdeeda ayaan ku qori doonnaa PhotoMath oo aan dooran doonaa. Marin laga helo dukaanka arjiga Google ayaa la furi doonaa waxaana naloo tusi doonaa Bluestacks. Waxaan kaliya u qasbanaan doonnaa inaan riixno badhanka rakibida sida aan ugu riixi laheyn mobiil kasta oo Android ah.
Marka rakibida la dhammeeyo, waxaan ka heli doonnaa astaanteeda ku jirta khaanadda codsiyada la rakibay, haddii aynaan helin, waxaan ku heli doonnaa innagoo isticmaaleyna mashiinka raadinta emulator-ka. Maskaxda ku hay in barnaamijka loo sameeyay taleefannada gacanta sidaa darteed waxaa laga yaabaa inuu leeyahay cillado kale oo ku isticmaalaya emulator-ka kombiyuutarka.
Tilmaamahani waxay ansax yihiin labadaba kumbuyuutarrada leh nidaamka hawlgalka Windows iyo kumbuyuutarrada leh nidaamka hawlgalka macOS.
Barnaamijyada xiisaha leh ee Android si loogu daydo kombuyuutarka
Waxaa jira codsiyo ama ciyaaro badan oo xiiso leh oo aanaan ka heli karin kumbuyuutarkeena, laakiin aan ku dayan karno dhib la'aan Bluestacks, waxaan magacaabi doonnaa kuwa ugu xiisaha badan.
Tifatiraha sawirada cajiibka ah ee ka dhigi doona sawiradeena ugu da'da weyn kuwa u eg kuwa hada la qaado kaamirooyinka ugu casrisan, waa codsi si sax ah u shaqeynaya nadiifinta sawiradeena madow ama muuqaalka leh in aan iska ilaalino markii mobiladu aysan aheyn sida ay hada yihiin.
Natiijadu waa mid la yaab leh, In kasta oo aysan u ekaan doonin sawirrada ugu wanaagsan ee aan maanta qaadanno, waxay siin doonaan muuqaal guud oo ku saabsan dhammaan sawirradaas aynaan rabin inay lumiso laakiin midna muu muujin. Haddii aan hayno galbeello ballaaran oo sawiro duug ah oo aan raadineynay hab aan ku dayactirno muddo dheer, tani waa fursaddeenna oo tan ugu wanaagsan ayaa ah inay gebi ahaanba bilaash u tahay Android sidaa darteed waa inaan rakibeynaa oo aan hagaajinaa dhammaan sawiradaas mid mid oo ku keydi nuqulada la tafatiray galka.
In kasta oo uu jiro nooc ka mid ah websaydhka WhatsApp oo hawlo badan qabta, had iyo jeer waxay kuxirantahay bartayada oo aan lahayn dhammaan howlaha aan ku raaxeysanno moobiladayada, oo leh nooca Android ee emulator, waxaan ku raaxeysan doonnaa codsi gabi ahaanba madax-bannaan oo WhatsApp ah kaas oo aan ku xiriirin karno lambar taleefan oo aan ku sameyn karno wicitaanno fiidiyoow ah iyo shaqooyinkeeda oo buuxa dhib la'aan.
Codsigan caanka ah ee lagu qasbo iyada oo loo marayo shirarka aan jecel nahay, iyaga oo dhammaantood lala midoobo nidaamkeeda fariimaha degdegga ah ee madaxbanaan, waa mid kale oo ka mid ah codsiyadaas oo aan ku raaxeysan karno emulator-ka Android. Marka lagu daro la socoshada shirarka aan jecel nahay, waxay kaloo noo ogolaaneysaa inaan sawiro soo dhigno oo aan heysano digniin dhammaantood isla markiiba iyada oo loo marayo ogeysiisyo riixid ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Sida loo Download Photomath ee PC Free (Nooca ugu dambeeya)
Xusuusta USB iyo microSD ee dhamaan isticmaalka Kioxia [DIB U EEGID]
Hadiyadaha ugufiican Valentine tignoolaji ah